July 21, 2019 - Page2of3- ThutaSone
ခင်ပွန်းသည်ရဲ့ နောက်ကွယ်မှာ အချစ်ဇာတ်လမ်းတစ်ခုဖြစ်နေတဲ့ ဇနီးသည်ကိုရက်ရက်စက်လက်စားချေခဲ့တဲ့ ခင်ပွန်း
ခင်ပွန်းသည်ရဲ့ နောက်ကွယ်မှာ အချစ်ဇာတ်လမ်းတစ်ခုဖြစ်နေတဲ့ ဇနီးသည်ကိုရက်ရက်စက်လက်စားချေခဲ့တဲ့ ခင်ပွန်း များသောအားဖြင့် ချစ်သူစုံတွဲ၊ လင်မယားတွေရဲ့ လမ်းခွဲရခြင်းအစက တစ်ဦးကတစ်ဦးအပေါ် မရိုးမသား လိမ်ညာဖုံးကွယ်ထားခြင်းကလို့ပဲဆိုရပါမယ်။ လိမ်ညာတယ်ဆိုတဲ့ နေရာမှာ သူတစ်ပါးမထိခိုက်အောင် လိမ်ညာခြင်းနဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ အပြစ်ကို ဖုံကွယ်ခြင်းဆိုပြီး ရှိတတ်ပါတယ်။ အဖြူရောင်မုသား (white lies) က ရှင်းရတာလွယ်ပေမယ့် […]
ဧရာဝတီမြစ်ရေသည် မန္တလေးမြို့တွင် စိုးရိမ်ရေမှတ်ထက် ကျော်လွန်
ဧရာဝတီမြစ်ရေသည် မန္တလေးမြို့တွင် စိုးရိမ်ရေမှတ်ထက် ကျော်လွန် မန္တလေးမြို့တွင် ဧရာဝတ်ီမြစ်ရေ စိုးရိမ်ရေမှတ်ထက် ၁၅ စင်တီမီတာ ကျော်လွန်ရောက်ကြောင်း မိုးလေဝသနှင့် ဇလဗေဒ ညွှန်ကြားမှု ဦးစီးဌာနက သိရသည်။မန္တလေးမြို့၏ စိုးရိမ်ရေမှတ်သည် ၁၂၆၀ စင်တီမီတာဖြစ်ပြီး ဇူလိုင်လ ၂၀ ရက်နေ့ မွန်းလွဲပိုင်းက တိုင်းထွာချက်အရ ၁၂၇၅ စင်တီမီတာတွင်ရှိနေပြီး […]
ယာဉ်ထိန်းရဲတစ်ဦအောင်ပန်း-ကလော လမ်းမပေါ်တွင်ယာဉ်တိုက် သေဆုံး
အောင်ပန်း-ကလော လမ်းမပေါ်တွင် ယာဉ်ထိန်းရဲတစ်ဦး ယာဉ်တိုက် သေဆုံး ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း၊ တောင်ကြီးခရိုင်၊ ကလောမြို့နယ်၊ အောင်ပန်း-ကလော သွားလမ်း Denko စက်သုံးဆီဆိုင် အနီးတွင် ယနေ့ ဇူလိုင်လ ၂၁ ရက်၊ နံနက်ပိုင်းက ယာဉ်ထိန်းရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တစ်ဦး ယာဉ်တိုက်ခံရ၍ သေဆုံးမှု ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ အောင်ပန်း-ကလောသွား ကားလမ်းဘေးတွင် […]
အမေကိုယ်စား အမေ့ပုံစံတူ အရုပ်နဲ့ ဘွဲ့ယူခဲ့တဲ့ အမျိုးသား
ကွယ်လွန်သွားတဲ့ အမေကိုယ်စား အမေ့ပုံစံတူ အရုပ်နဲ့ ဘွဲ့ယူခဲ့တဲ့ အမျိုးသား ဖိလစ်ပိုင်လူမျိုး Paulo Johnက ဘွဲ့ယူတဲ့နေ့က ဓာတ်ပုံလေးတွေကို ဂျူလိုင်လ 16 ရက်နေ့က Twitter မှာ တင်လိုက်တဲ့အခါ retweet 4600 ရရှိခဲ့ပါတယ် ။ Paulo က ဘွဲ့ဝတ်စုံကို ဝတ်ထားပြီး […]
အလောင်းတော်ကဿပ ဘုရားဖူးစေ ချင်လွန်းလို့ အမေအိုကိုကိုယ်တိုင်ထမ်းပိုးပြီး ပို့နေတဲ့ ဆရာတော်တစ်ပါး
အမေအိုကို အလောင်းတော်ကဿပဘုရားဖူးစေချင်လွန်းလို့ ကိုယ်တိုင်ထမ်းပိုးပြီး ပို့နေတဲ့ ဆရာတော်တစ်ပါး လမ်းမလျှောက်နိုင်တော့တဲ့ အမေအိုကိုအလောင်းတော်ကဿပဘုရားဖူးစေချင်လွန်းလို့ကိုယ်တိုင်ထမ်းပိုးပြီး ပို့နေတဲ့ ဆရာတော်တစ်ပါးရဲ့ ပုံပါ ။ credit-The Melting Pot4U
သရဏဂုံကိုယ်တိုင်တင်ပြီးမသေခင်ကတည်းက အုတ်ဂူတည်ထားတဲ့ သူ မုံရွာက ဦးကျော်ဝင်း သေပြီးမှသရဏဂုံ တင်လျင် သရဏဂုံတည်-မတည်ကိုမသိရသည်ကိုတွေး၍သက်ရှိထင်ရှားရှိစဉ် ကိုယ့်သရဏဂုံကိုယ်တိုင်တင်၍ သေလျင်သဂြိ င်္ုဟ်ရန်အုတ်ဂူတည်ထားပြီးဖြစ်ကြောင်းမုံရွာမြို့နယ်အောင်သာကျေးရွာနေ သက်ရှိထင်ရှားသရဏဂုံတင်သူ အဓိပတိဦးကျော်ဝင်းကပြောသည်။ “ကျုပ်အယူအဆပြောရရင် သေသွားကြတဲ့သူတွေကို ကျန်နေတဲ့မိသားစုက မြေပုံရှိရာသချိ င်္ုင်းသွားပြီး သေသူရဲ့အကျီ င်္ပုဆိုး ထမိန် တဘက် စတာတွေနဲ့သရဏဂုံတင်ဖို့တရားနာဖို့လိုက်ခဲ့ပါဆိုပြီးရိုးရာထုံးတမ်းစဉ်အရ လုပ်နေကြတာတွေတွေ့ရတယ်။အဲဒီဝိဉာဉ်ကလိုက်လာလား။မလိုက်လာလား ဆိုတာမသိရဘူး။သေပြီးမှသရဏဂုံတင်တယ်ဆိုတာလည်းသရဏဂုံတည်နိုင်လား။မတည်နိုင်ဘူးလားဆိုတာမသိရပါဘူး။ […]
ဓမ္မာစရိယလည်း အောင်ပြီးပါပြီ….မြန်မာနို်င်ငံမှာ သာသနာပြုနေတဲ့ အမေရိကန်မှ သီလရှင်ဆရာကြီး ဒေါ်ဝဇီရညာဏီ ဘုရားသမီးတော် အမေရိကန်မှ သီလရှင်ဆရာကြီး ဒေါ်ဝဇီရညာဏီ” မြန်မာစကားကို ကျွမ်းကျင်စွာပြောတတ်ပြီး ဓမ္မာစရိယလည်း အောင်ပြီးပါပြီ..မြန်မာပြည်မှာ သီတင်းသုံးရင်း သာသနာပြုနေပါတယ်.. ပဏ္ဍိတရာမ ဆယ်မိုင်ကုန်းတရားရိပ်သာသို့နှစ်စဉ် နိုင်ငံခြားသားယောဂီများလာရောက်၍ တရားအားထုတ်ကြပါတယ်..(ဒီဇင်ဘာလနဲ့ ဇန်နဝါရီလများကို နိုင်ငံခြားသားယောဂီများအတွက်သီးသန့်အချိန်အချိန်ပေးတယ်လို့ သိရပါတယ်)ဒီဆရာကြီးဟာ တရားစခန်းမှာအင်္ဂလိပ်မြန်မာ ဘာသာပြန်အဖြစ် […]
စားဖိုမှူးကြီး တစ်ဦးကွမာစတာရှက်ဖ် ပြိုင်ပွဲကို အကွက်ကျကျ ထောက်ပြ ဝေဖန်လိုက် ပထမဦးစွာ မှတ်ချက်ပေးရမယ်ဆိုရင် သူတို့ program ဟာ ကမ႓ာ မှာ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ကို အောင်မြင်နေတဲ့ စားဖိုမှူးတို့ ရဲ့ image ကိုအသုံးချ တဲ့ program တစ်ခုပါ။ စားဖိုမှူးတွရဲ့ image […]
၂၁-၇-၂၀၁၉မိုုးခေါင်တဲ့ စစ်ကိိုင်းတိုင်းအောက်ပိုင်း၊ မန္တလေးတိိုင်း နဲ့ မ ကေ ွးတိိုင်းတို့အတွက်် မုန်တိုင််းလာပြီ ရင်ခုုန်သံနည်းနည်းမြန်လာသည်် ၂၁-၇-၂၀၁၉ နံံနက််(ဝဝး၄၅)နာရီ။ ၂၀၁၉ ခုနှစ််ဟာ ကမ္ဘာ့အပူပိုင်းသမူဒ္ဒယာတေ ွမှာ မုန်တိုင်းအဖြစ်နည်း တဲ့ နှစ်တစ်နှစ်ဆိုရင် မမှားပါဘူး။ ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော််မှာဆိုရင် မေလဆန်းက ဆိုင်ကလုန််းFerni တစ်လုံးသာ ဖြစ်ပါသေးတယ်။ အခြား […]
မေတ္တာပို့ပြီး အလှူခံနေသောအဖွား… ဒီနေ့ဆေးခန်းသွားပြတုန်းတွေ့မိတာလေးပေါ့….အဖွားတစ်ယောက် ယောမင်းကြီးလမ်းထောင့် parkroyal hotel ဘက်ခြမ်းမှာ မေတ္တာပို့ပြီး အလှူခံနေတာ…. ခါတိုင်းဆို အဖိုးအဖွားအိုတွေတွေ့ရင် လှူပြီးထွက်လာလိုက်တာပဲ. …ဒီနေ့တော့ စပ်စုချင်လာတာနဲ့မေးကြည့်မိတယ်….အဖွားဘယ်ကလာပြီးအလှူခံသလဲပေါ့…. အဖွားကအသက်ရ၆ရှိပါပြီ….ရှမ်းပြည်တောင်ကြီး စိန်ပန်းရပ်ကွက်က ဒေါ်တင်ကြည်ပါတဲ့. …ကွမ်းယာရောင်းရင်း ကားတိုက်ခံရလို့ခြေထောက်ကျိုးသွားပြီး မင်္ဂလာဒုံဆေးရုံမှာ ၂နှစ်ခွဲ ကျောက်ပတ်တီးနဲ့နေခဲ့ရတယ်တဲ့…. ခုတော့ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးမှာပြပါတယ်တဲ့…. သရက်တောကျောင်းတိုက်မှာနေပါတယ်….. သရက်တောထဲက […]